Soso-kevitr'i 8 Pierre Rabhi momba ny fiainana hiaina mandritra ny fikarakarana ny fiainana - Afrikhepri Fondation
LIzy no planeta eto an-tany no hany oasis amin'ny fiainana fantatsika any an'efitra midadasika. Ny fikarakarana azy io, ny fanajana ny fahamendrehana ara-batana sy biolojika, ny fanararaotana ny loharanon-karena an'izany amin'ny antonony, ny fametrahana fandriam-pahalemana sy firaisan-kina eo amin'ny olombelona, ​​amin'ny fanajana ny karazan'aina rehetra, no tetik'asa tena misy sy mahatalanjona indrindra izay izany.
Ireto soso-kevitra manaraka ireto dia nalaina avy amin'ny satan'ny iraisam-pirenena momba ny tany sy ny mahaolona, ​​nosoratan'i Pierre Rabhi ho an'ny hetsiky ny Colibris, avy amin'ny bokiny mankany amin'ny fahasambarana feno fahasambarana, navoakan'ny Actes-Sud tamin'ny 2010.
Tsy hevitra fotsiny, ireo tolo-kevitra ireo dia mamerina modely iray amin'ny fiarahamonina hanolotra safidy hafa ho an'izao tontolo izao ankehitriny. Ka hijanona tsy ho vola fotsiny ny fotoana, ka ho lasa mahafinaritra indray ny fahanginana, hany ka ny lojika ahazoana tombony tsy manam-petra dia manome ny an'ny velona, ​​mba tsy ho toy ny motera ny fikapohan'ny fontsika mipoaka, ary farany miaina sy mikarakara ny fiainana.
1: Agroecology, ho an'ny fambolena biolojika sy etika
Amin'ireo asan'olombelona rehetra, ny fambolena no tena ilaina indrindra, satria tsy misy olombelona afaka tsy mahazo sakafo. Ny agroecology izay atolotray ho etika fiainana sy teknika momba ny fambolena dia mamela ny mponina hamerina ny fizakan-tenany, ny fiarovana azy ireo ary ny fahasalamany, eo am-panavaozana sy hitehirizana ny lova mahavelona azy ireo.
2: Afindrao ny toekarena mba hanomezana azy dikany
Ny famokarana sy fanjifàna eo an-toerana dia filàna tanteraka ho an'ny filaminan'ny mponina manoloana ny filany fototra sy ara-dalàna. Raha tsy mikatona amin'ny fifanakalozana mifameno izy ireo, dia lasa cradles mahaleo tena manome lanja sy hikarakara ny loharano eo an-toerana ireo faritany avy eo. Ny fambolena amin'ny ambaratonga olombelona, ​​asa tanana, orinasa madinidinika sns ... dia tokony haverina amin'ny laoniny mba hahafahan'ny olom-pirenena betsaka araka izay azo atao ho lasa mpilalao amin'ny toekarena indray.
3: Ny vehivavy ao am-pon'ny fiovana
Ny fanitsakitsahana ny vehivavy amin'ny tontolo lahy sy vavy mahery setra sy mahery setra dia mijanona ho iray amin'ireo kileman-toetra lehibe amin'ny fivoaran'ny olombelona. Ny vehivavy dia mirona kokoa hiaro ny fiainana noho ny manimba azy. Tokony hanome fanajana ny vehivavy, mpiambina ny fiainana isika ary hihaino ny vehivavy misy antsika tsirairay avy.
4: Faly mitebiteby manohitra ny "hatrany hatrany"
Manoloana ny "bebe kokoa" tsy manam-petra izay manimba ny planeta ho tombontsoan'ny vitsy an'isa, ny fahononam-po dia safidy mahatalanjona entanin'ny saina. Zavakanto sy etikan'ny fiainana izy ity, loharanom-pahasambarana ary fahasalamana lalina. Mampiseho toerana politika sy fihetsika fanoherana ny tany, fizarana ary fitoviana.
5: Fanabeazana iray hafa hianarana nefa talanjona
Mirary fanabeazana tsy miorina amin'ny tahotra ny tsy fahombiazana fa amin'ny hafanam-po hianarana. Izay manafoana ny "tsirairay avy ho azy" hanandratra ny herin'ny firaisankina sy ny fifankatiavana. Izay mametraka ny talentan'ny tsirairay amin'ny fanompoana an'ny rehetra. Fanabeazana mandanjalanja ny fisokafan'ny saina amin'ny fahalalana misintona amin'ny fahiratan-tanana sy ny famoronana mivaingana. Izay mampifandray ny zaza amin'ny natiora, izay ananany trosa ary tsy maintsy haloany ny fahavelomany, ary manaitra azy amin'ny hatsarana, ary amin'ny andraikiny amin'ny fiainana. Satria izany rehetra izany dia ilaina amin'ny fampisondrotana ny fahatsiarovany tena.
6: Emopiaing utopia
Utopia dia tsy ny chimera fa ny "tsy toerana" an'ny mety rehetra. Manoloana ny fetra sy ny fiafaràn'ny fombam-piainantsika dia mitondra fiainana izy io, afaka manatanteraka izay heverintsika fa tsy mety. Ao amin'ny utopias ankehitriny no hamahana ny vahaolana rahampitso. Ny utopia voalohany dia tsy maintsy apetraka amin'ny tenantsika, satria ny fiovana ara-tsosialy dia tsy hitranga raha tsy misy ny fiovan'ny olombelona.
7: Tany sy humanisma
Manaiky eto an-tany isika, ny soa iraisan'ny olombelona, ​​ny antoka tokana amin'ny fiainantsika sy ny fahavelomantsika. Izahay dia manolo-tena amin'ny feon'ny fieritreretana, eo ambanin'ny fitaoman'ny humanisma mavitrika, hanome anjara biriky amin'ny fanajana ny karazan'olona rehetra ary amin'ny fiadanam-po sy fanatanterahana ny olombelona rehetra. Ary farany, izahay dia mihevitra ny hatsaran-tarehy, fahononam-po, fahamarinana, fankasitrahana, fangorahana, firaisan-kina ho toy ny soatoavina ilaina amin'ny fananganana tontolo mety sy azo iainana ho an'ny rehetra.
8: Ny lojikan'ny zavamananaina ho fototry ny fanjohian-kevitra
Heverinay fa ny maodely manjaka ankehitriny dia tsy azo ovaina ary ilaina ny fanovana paradigma. Maika ny fametrahana ny olona sy ny natiora ho fototry ny ahiahintsika ary hametraka ny loharanon-tsika sy ny fahaizantsika rehetra eo am-pelatanany.
Avy amin'i Mathieu Doutreligne
Jereo ny tendrombohitra eo anelanelantsika (2017)
Benkos Biohó, mpitarika andevo amin'ny hetsika fanafahana sy ny endrika Afro-Kolombiana endrika
Inona no lazain'i Amma amin'izao tontolo izao (Audio)
Ny fampianarana fototra momba ny Bodisma dia mifototra amin'ny 4 Noble Truths